नरिवल तेलले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? कति स्वस्थ्यकर छ ? नरिवल तेलको विवाद - ज्ञानविज्ञान
नरिवलको तेल खानु स्वास्थ्यका हिसाबले निकै राम्रो मानिन्छ । तर एउटा नयाँ खोजले नरिवलको तेल खानेहरुको मनमा शंका पैदा गरेको छ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा टीएच चेन स्कूल अफ पब्लिक हेल्थका प्राध्यापक केरिन मिशेल्सले खानामा प्रयोग गर्न नरिवलको तेल सबैभन्दा खराब तेलमध्येको एक भएको दाबी गरेका छन् ।
सेचुरेटेड फ्याट अत्यधिक
हानी पनि, फाइदा पनि
नरिवल र नरिवल पानि कति उपयोगी ?
Up Next खुसी रहन अरूबाट धेरै आशा नगर्नुहाेस् र यी कुरा कहिल्यै नभुल्नुस्